Photoshop Crack 2021 Version: Azo Atao Ve Ny Mamaky Photoshop?
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop Crack
Tsy fantatra raha ara-dalàna ny fampiasana Photoshop crack? Mahatsiaro fa mety hanimba ny solosainanao ny kinovan'ny Photoshop? Te-hihary vola am-polony am-polony amin'ny fisoratana anarana ary tsy mitsahatra mitady rakitra crack Photoshop miasa? Androany no hamaliako ireo fanontaniana sy fanontaniana hafa ary hizara fomba tena mahasoa momba ny fampidinana maimaim-poana ny Ps.
Inona no atao hoe triatra Photoshop?
Na dia fikarohana malaza be aza ny "Photoshop crack" dia io no iray amin'ireo fomba mampidi-doza sy tsy ara-dalàna amin'ny fampiasana Adobe Photoshop nefa tsy mandoa famandrihana. Amin'ny Internet, misy fisie crack Photoshop izay matetika azo alaina amin'ny endrika Photoshop KeyGen, patch na download master.
Amin'ny teny tsotra, ny triatra dia midika hoe fanesorana ny fiarovana ny lozisialy noforonin'ireo mpamorona mba hamerana na hifehezana ireo fahaiza-miasa. Ny lahasa lehibe amin'ny triatra dia ny fanokafana ny fampiasa mihidy hampiasaina maimaim-poana na hamonoana tanteraka ny rafitra fandoavam-bola. Amin'izany fomba izany, rehefa nametaka ny Adobe Photoshop CC namaky teo amin'ny PC-nao ianao dia nandingana tsy ara-dalàna ny rafitra fampandehanana ary vokatr'izany dia tsy angatahina intsony ny lakilen'ny fampidirana.
Top Photoshop Action Fizarana 1
Filename: Top Photoshop Action Fizarana 1.zip (Download)
Filesize: 7 Kio
Top Action PS 2
Filename: Top Photoshop Action Fizarana 2.zip (Download)
Fa maninona no ratsy ny fampiasana photoshop crack?
Ny fiarovana aloha, sa tsy izany? Adobe Company koa dia mino sy manome toky fa amin'ny fisintomana ny rindrambaiko, dia hametraka programa "madio" ianao nefa tsy misy vela-pandrika miafina.
Na izany aza, ny fisintomana ny crack Photoshop CC avy amin'ny loharanom-pahalalana tsy fantatra dia mety hahita olana lehibe maro ianao. Hotantaraiko anao ireo momba ny loza mampidi-doza indrindra.
Jereo ny fomba hahazoana Photoshop maimaim-poana ary ara-dalàna.
Sintomy ny Fizarana 1 Ps Overlay (507 KB)
Sintomy ny Fizarana 2 Ps Overlay (751 KB)
Malware / virosy. Ny programa antivirus tsara dia tsy afaka miaro rakitra fisie Photoshop voan'ny aretina foana ary tsotra ny antony mahatonga an'io. Ny zavatra dia ny fahitana ny fandrahonana rehetra dia tsy maintsy ampidirin'ny mpandraharaha ity viriosy ity mihitsy ao anaty tahiry mirindra; amin'ny fomba toy izany ihany, ny rindrambaiko dia hahita fandrahonana ho an'ny PC-nao ary hanasitrana azy. Ireo mpijirika mahatakatra izany, mamorona viriosy vaovao ary mampiditra azy ireo ao anaty rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra ho an'ny PC.
Lasa lany andro haingana ny rindrambaiko. Ny Adobe Photoshop crack ary koa ny rindrambaiko voajirika hafa dia tsy mahazo miditra amin'ireo mpizara ofisialy ary voafetra amin'ny resaka fanavaozana. Amin'izany fomba izany dia tsy hahazo fanavaozam-baovao izy, tsy ahitsy ny lesoka ary tsy hihatsara ny fitaovana.
Tsy misy fanohanana Adobe. Ankoatry ny fiarovana azo antoka, Adobe dia tompon'andraikitra amin'ny vokatra vokariny ary rehefa misy olana ara-teknika, ohatra, miseho ny lesoka na mihidy ny rindrambaiko rehefa manokatra fisie RAW, ny Support Teknika 24/7 dia hiteny foana ny fomba hamahana an'io na io olana io.
Raha miresaka momba ny crack Photoshop ianao dia tsy hanana fidirana amin'ny Support ara-teknika satria tsy mifamatotra amin'ny kaonty ny softe anao ary tsy voasoratra ao amin'ny fotony.
Fahadisoana sy tsy fahombiazan'ny rafitra. Ny famakiana ny Adobe Photoshop dia matetika ireo mpijirika dia tsy miraharaha ireo tsipika kaody loharano manitsakitsaka azy ireo na mamafa fotsiny. Vokatr'izany, isan-karazany Mihemotra ny Photoshop mety hitranga ny olana.
Fanitsakitsahana ny lalàna izany. Tsy ara-dalàna ny piraty ary mety hamely anao amin'ny "bonus" amin'ny endrika lamandy manomboka amin'ny $ 1000 ka hatramin'ny tsy fanananao fahalalahana na fananana.
Hamantatra bebe kokoa mahatsara sy maharatsy ny Photoshop.
Inona avy ireo safidy ara-dalàna amin'ny vaky Photoshop?
Te hahafehy ny fampiasa Photoshop rehetra ve ianao sa mila rindrambaiko mandroso amin'ny asa? Misafidiana iray amin'ireo drafitra azo aseho etsy ambany; manana tombony samihafa izy ireo ary manolotra ny fanohanan'ny mpanjifa 24 ora. Ity misy lisitra feno an'ny maodely famandrihana Adobe rehetra izay misy Photoshop:
Sehatra: Mac OS, Windows
Vidiny: Fitsarana maimaimpoana na $ 19.99 / volana
Amin'ny fampiasana ny Photoshop Single App Plan, azonao Ps ho an'ny solosaina birao sy iPad, fidirana amin'ireo fiasa farany sy fanavaozana, fitehirizana rahona 100GB, Adobe Fresco, Adobe Portfolio, Adobe Fonts ary Adobe Spark
Hamantatra bebe kokoa momba ny Elemen Photoshop vs Photoshop.
2. Drafitra fakana sary (20 GB)
Vidiny: $ 9.99- $ 19.99 / volana
Mino aho fa io no karazana famandrihana malaza indrindra ho an'ny mpitifitra matihanina raha ny tahan'ny vidiny / kalitao no resahina; manome anao ny fitaovana rehetra ilainao hanovana, hamerenana ary hitantanana sary. Ahitana Photoshop ho an'ny PC sy iPad, Lightroom, Lightroom Classic, 20GB na 1TB fitehirizana rahona, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, Adobe Spark, ary fidirana amin'ireo safidy farany sy fanavaozana vantany vao mivoaka izy ireo.
3. Drafitra Cloud Creative Creative rehetra
Vidiny: Fitsarana maimaimpoana na $ 52,99 / volana
Ny Apps Apps Plan rehetra dia fonosana iray manerantany, azonao ampiasaina hanatanterahana saika ny asa rehetra ao anatin'izany ny retouching mandroso, ny fampiroboroboana ny sary 3D, ny fanaovana sary, ny fanodinana lahatsoratra, ny fanovana horonantsary, ny fanampiana effets manokana, ny modeling sns. Cloud, hahazo 10GB fitehirizana rahona ianao, endritsoratra Adobe Portfolio manokana, endritsoratra Adobe sy Spark.
Jereo ny fomba hahazoana Creative Cloud maimaim-poana.
Alohan'ny mividy Photoshop, rehefa nisafidy iray amin'ireo fomba voalaza dia manoro hevitra anao aho hijery izany safidy Photoshop maimaim-poana. Angamba, ny fiasan'ireo programa ireo dia ho ampy hanomezana izay ilainao.
Mampiasà GIMP MAIMAIMPOANA
Fanohanana plug-ins isan-karazany
Manohana saika ny fisie RAW rehetra
maharatsy ny mifampiresaka-
Fototra kely amin'ny lesona fanofanana
Tsy misy fanodinana fonosana
Ny dikan-Mac Mac dia miasa tsy mety
GIMP dia tonian-dahatsoratra miampita sehatra miaraka amina kaody loharano misokatra; izy io dia misy interface interface intuitive sy fitaovana mandroso ho an'ny retouching sary lalina ao anatin'izany ny sarontava, sarona ary borosy azo ovaina. Ankoatr'izay, azonao atao ny manova tsipika ny kaody loharano ary manatsara ny fampiharana tsy miandry ny fanavaozana manaraka.
Mahaliana ny milaza fa ny GIMP dia manohana ny plug-in Adobe Photoshop rehetra misy ary azonao atao ny mampiasa overlay na koa borosy matihanina efa voaomana.
Mampiasà XNVIEW MAIMAIMPOANA
Fanohanana plug-in Photoshop
Seho an-tsary mba hijerena ny fanangonana sary anao
Misavoritaka kely ny torolàlana fametrahana
XnView dia mpamoaka sary amin'ny raster manana kaody loharano misokatra ho an'ny Windows. Noho ny interface tsotra sy fitaovana intuitive, ity programa ity dia mety ho an'ny zaza vao teraka. Tsy toy ny GIMP, XnView dia manolotra fanodinana batch ny fisie RAW sy JPEG.
Miaraka amin'ny fahafaha-mijery ireo saryo amin'ny fomba samihafa (ao anatin'izany ny fampisehoana slide), XnView koa dia manana fitaovana hanovana sary amin'ny fampiasana slider, sarontava, sosona, borosy, effets ary sivana azo ovaina.
Fitaovana mandroso amin'ny fikarakarana lahatsoratra
Mety amin'ny fanovana sary ifotony
Tsara hampiroborobo ny doka, doka
Fampiasana karama fanampiny
Tsy toy ny safidy hafa maimaimpoana Photoshop maimaimpoana roa i Canva, mametraka ny tenany ho tonian-dahatsoratra mandroso hamolavolana endrika ao anatin'izany ny firafitra isan-karazany, sora-baventy fanaovana dokam-barotra kely, logo, sns.
Ny rindranasa dia misy ihany koa fitaovana sasany amin'ny fanitsiana loko sy ny fanamboarana sary fototra ao anatin'izany ny slider mandeha ho azy hanatsara ny aloka, ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny fitaovana Crop ary ny sivana.
Jereo bebe kokoa momba Mpanonta sary Canva mamaky ny famerenako feno.
Na inona na inona drafitra ampiasainao, satria ny Photoshop 2020 sy ny kinova taloha dia manohana plug-in isan-karazany ao anatin'izany ny fiasa, takelaka, borosy ary firafitra. Amin'ny fampiasana plug-ins dia azonao atao ny manamora ny fizotran'ny fanovana sary sy hitehirizana ny fotoanao.
Ampiasao ity hetsika matte maimaimpoana ity ho an'ny sarinao raha te-hamelombelona ny loko ianao, ampio famirapiratana ary asongadino ireo andinindininy. Izy io dia miasa tanteraka miaraka amin'ny sary saripika nalaina tamin'ny jiro voajanahary sy artifisialy.
Jereo tsara ity torolàlana tsikelikely amin'ny ny fomba fametrahana ny hetsika Photoshop.
Ny sary fakana kalitao dia takiana foana satria amin'ny fomba toy izany no ahafahanao mandrisika ny mpanjifa hividy vokatra. Ampiasao ity hetsika ity dia hanampy anao hasiaka sy tsy hitovizany amin'ny sarinao manasongadina ny vokatra rehetra ary hampisaraka azy ireo avy eo aoriana.
Jereo ny fomba famoronana sary mahay mamaky ireo fampianarana sary momba ny vokatra.
Mahagaga fa mihoatra ny 70% ny sary no alaina amin'ny maraina na mandritra ny andro raha tsy eo ambanin'ny faravodilanitra ny masoandro ary afaka mahazo jiro sahaza ny sarinao ianao. Na izany aza, tsy eo anilanao foana ny toetrandro ary raha tokony hiandry rahona mahafinaritra eny amin'ny lanitra ianao dia ampiasao ity takelaka maimaimpoana ity. Izy io dia hameno ny lanitrao amin'ny rahona voajanahary sy mahavariana.
Rehefa avy nisintona ny triatra Adobe Photoshop avy amin'ny loharano tsy ofisialy ianao, dia hanimba ny solo-sainanao. Sintomy ny Photoshop avy amin'ny tranonkala Adobe ofisialy ary ampiasao izany nefa tsy mandika ny lalàna.
Inona no atao hoe Photoshop Crack?
Mampidi-doza ve ny Photoshop Crack?
Inona ny kinova tokony hampiasaiko?
Photoshop Crack: tokony hampidina azy io ve aho?
Sintomy ny Photoshop maimaim-poana